Raha eo amin'ny varotra na marketing ianao, dia mahazoa mamelombelona izao! | Martech Zone
Raha eo amin'ny varotra na marketing ianao, dia mahazoa mamelombelona izao!
Alarobia, Septambra 24, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mitranga izany isan-kerinandro. Mahazo mailaka avy amina mpivarotra na vinavina aho ary miara-miasa daty hiresahana izahay. Hizaha ny tranonkalany aho ary mahita raha mety na tsia. Mety hifandray amin'izy ireo mihitsy aza aho LinkedIn hianatra bebe kokoa momba azy ireo. Efa voafaritra ny daty, ekena ny fanasana amin'ny kalandrie ary mandroso aho.
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia misy fanairana mipoitra amin'ny olona iray. Tsy fantatro ny anarana, ka mijery ny sehatra niavian'ny adiresy mailaka azoko aho. Raha tsara vintana aho dia azy ireo ny orinasa. Raha tsy izany aho dia voafitaka. Mijery ny tranonkalany aho ary mitazona ny fahatsiarovako izany ary ankehitriny dia fantatro hoe iza izy ireo ary inona no tadiavin'izy ireo. Raha tsara vintana aho.
Tsy dia tadidiko tsara (siansa io!) Ka mila famantarana toa izao aho. Indraindray aho dia manoratra an-tsoratra vitsivitsy ao amin'ny Evernote, indraindray amin'ny hetsika kalandrie, amin'ny fotoana hafa atokisako fa ho tadidiko… fa tsy izany. Amin'ny fotoana tsy fahita firy, mandehandeha ao amin'ny biraoko ilay olona ary tsy fantatro hoe iza izy ireo na hoe maninona izy ireo no eo ka milalao dihy aho… anontanio azy ireo ny zavatra iasan'izy ireo, manao ahoana ny zavatra sns ... andramo alefa ny fahatsiarovako.
Misy fanasitranana ihany amin'ny farany! Refresh dia rindranasa finday sy tranonkala izay ahafahanao mitady olona ary mahita ny mombamomba azy ireo sy izay fifandraisana mety nifanaovana taminao - na tamin'ny alàlan'ny mailaka na sosialy.
Ny tsara indrindra, ny fampiharana dia miaraka amin'ny fanairana mialoha sy alefa ho anao. Nahazo fivoriana ao anatin'ny 15 minitra? Mahazo naoty milaza aminao hoe iza izy, inona no niresahanao farany azy ireo, ary ahafahanao manoratra momba azy ireo aza. Ivotoeram-pahalalana ho an'ny olona toa ahy izay sarotra ny mitadidy olona hafa ankoatry ny alikany (Gambino).
Mahafinaritra. Tsara tarehy izy izany. Mety io. Sign up now ary azonao atao ny mampifandray ireo kaonty mailakao, ireo kaonty sosialinao ary hatrany amin'ny Evernote.
Izaho dia hijery somary tsy dia menatra intsony amin'ny manaraka fandaharana fihaonanao amiko!
Fanavaozana: Famelombelona ny Salesforce natomboka!
Mahafinaritra ny mahita Refresh nampifandray mivantana ny vahaolana ho an'ny Salesforce, fitaovana iray mahafinaritra ho an'ireo mpivarotra hiditra amin'ny vaovao momba ny fitarihana, ny mpiara-miombon'antoka ary ny mpanjifa.
Tags: mahita olonaLinkedInhitady-barotraanaranaNetworkPeopleRefreshfampiharana vaovaorefresh.ioFanamafisana ny varotrasalesforcerindrambaiko salesforceTambazotram-pifandraisanajereo ny olona
Mitandrema ny mpivarotra: mihazakazaka ny fironana amin'ny fivarotana an-tserasera
Leanplum: andrana A / B ny atiny finday sy ny hafatrao
Sep 27, 2014 amin'ny 11: 21 AM
Tena milay be. Efa nanandrana niditra (namorona sy nanao kaonty) imbetsaka aho ary tsy mahomby hatrany.
Mihevitra aho fa finday 99% izy ireo.